I-Equinix NY4 Kusuka kwiFXCC | Yenza i-Forex Latency Yinto Eyadlulayo
ikhaya / malunga / Kutheni iFXCC / I-Equinix Data Centre
Ukwenza UkuLungisa Kwinto Eyadlulayo
Ngoko unayo i-PC yakutshanje kunye enkulu. Iitoni zesantya seprojekthi, iintaba zeRAB kunye nomama wazo zonke iinkonzo ze-intanethi. Ingxaki kukuba, ukuhweba kwakho kwangaphambili kukuxhomekeke kwi-teknoloji yakho ye-forex broker isebenzisa ukuthumela imiyalelo yakho nakwiimarike. Isantya se-server esancinci kunye ne-latency banokutya kwiinzuzo zakho zokurhweba. Kule marike, ixesha liyimali.
Apha apha kwi-FXCC siyaziqhayisa ngokubonelela ngezona zixhobo ezingcono kakhulu kubaxhasi bethu ukuba bathengise. I-mile eyongezelelweyo kwiziseko ziyi-FXCC NY4 Equinix MT4 iseva.
Isixhobo seva ye-Equinix se-NY4 sitholakala kwi-hop kunye nokwehla ukusuka eWall Street, entliziyweni yeNew York. Ngalobu buchwepheshe be-server, i-FXCC iphambili ye-ECN broker ithatha inxaxheba kwi-Equinix Financial Exchange Exchange. Iimveliso zakho ngoku ziyinxalenye yentsebenziswano yee-hubs zokurhweba kunye namaseva asebhanka, akwiziko leenkcukacha ze-Equinix.
Ixesha ngokwenene yimali kwiimarike zeemali kwaye ngubani na ixesha lokulinda amaseva amancinci ukuba enze i-oda yakho?
I-Equinix I-NY4 Data Centre esuka kwi-FXCC. Amandla okukwenza ukuba ube yingxenye ye-Market Forex.